Kulan ay saraakiisha Gaalada ah ee AMISOM isku badbaadinayaan oo Muqdisho ku dhaxmaray hogaanka AMISOM.
Last Updated on Sunday, 05 June 2011 11:42 Written by Administrator Sunday, 05 June 2011 11:29
Kulan xassaasi ah oo Xerada Xalane ku yeesheen saraakiisha Taliska Ciidamada Kuffaarta Afrikaanta ah ayay dib u habeyn ku sameeyeen hogaanka ciidankooda ka dib markii shalay ay dagaalka Boondheere ku waayeen abaanduulihii heystay aagag dhowr ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho.
Kadib markii ay ciidamada kufaarta ah ku jabeen dagaalkii Boondheere ayay kulan deg deg ah isugu yeereen dhamaanba saraakiishooda iyo abaanduulayaasha si looga arrinsado guul darada soo korortay.
Ilo lagu kalsoonyahay oo ay SomaliMeMo ka heshay sirdoonka Mujaahidiinta ayaa sheegaya in Taliyaasha ciidanka AMISOM ay canaanteen abaanduulayaasha aagaga oo ay ku dhaliileen in ay ciidanka halis ku geliyeen dagaalyahanka shabaab oo ah kuwa aan waabaneyn.
Kulankan oo u badnaa canaan iyo in ladaba qabto gaadiidka ka gubanaya gaalada iyo ciidanka badan ee ka dhimanaya AMISOM ayaa yimid kadib markii dagaalkii Shalay ay Mujaahidiintu ku gubeen 7 gaadiid dagaal ah islamarkaana ay ku dileen taliyihii ugu sareeyay ciidanka Afrikaanta ee aagga Jubba sidoo kale waxaa dagaalkaasi ku bakhtiyay madaxii Howlgalka taangiyada kufaarta Afrikaanta ah.